20/10/2019 Yan Naing 0
အသောက်များပြီး ခေါင်းကိုက် တတ်သူတွေ အတွက် အလွယ်ကူဆုံး ကုထုံးများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ အရက်နာ ကျတတ်သူတွေ ၊ အသောက်များပြီး ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ဖြစ်သူတွေ အတွက် နိုင်ငံပေါင်း ( ၄ ) နိုင်ငံကအလွယ်ဆုံး ကုထုံး နည်းလမ်းတွေကို Continuous reading
မဖြစ်မနေ လမ်းခွဲရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြတ်သားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ မ ဖြစ် မ နေ ရန် မ ဖြစ် ပါ နဲ့ သည်း ခံ ပါ မ ဖြစ် မ နေ ရန် ဖြစ် ရ Continuous reading
ရေဆိုးများကြောင့် မွေ;ရပ်မြေကိုပင် စွန့်ခွာ ရတော့မလို ဖြစ်နေကြတဲ့ ဒေသ
ရေဆိုးများကြောင့် မွေ;ရပ်မြေကိုပင် စွန့်ခွာ ရတော့မလို ဖြစ်နေကြတဲ့ ဒေသ မွေးရပ်မြေ ကို စွန့်ခွာ သွားရတော့ မလို ဖြစ်နေပြီး ခု တလော သတင်းတွေ ပြန့်နံ နေတဲ့ ကရင် ပြည်နယ် ဘားအံ မြို့နယ် သံလွင်မြစ် / သံလွင် တံတားရဲ့ Continuous reading
မီတာဝန်ဆောင်ခ ဟု ကောက်ခံထားသော ၅၀၀ကျပ်အကြောင်း
မီတာဝန်ဆောင်ခ ဟု ကောက်ခံထားသော ၅၀၀ကျပ်အကြောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများသိရှိလေ့လာနိုင်ပါရန် မီတာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်ခ လျှပ်စစ်မီတာများ လစဉ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ကောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲ ပေးဆောင်နေရကြောင်း၊ အိမ်သုံးမီတာ တစ်လုံးတွင် တစ်လ ၅၀ဝိ/- ကျပ် ပေးနေရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုနေမှုများရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်မ်ီတာသည် Continuous reading
အချိန်လွန်မှ ဆွမ်းတော် စွန့်ခြင်းသည် ငရဲကြီးနိုင် ပါသလား ?
အချိန်လွန်မှ ဆွမ်းတော် စွန့်ခြင်းသည် ငရဲကြီးနိုင် ပါသလား ? အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မ မေးချင်တာလေး ရှိလို့ပါဘုရား အရှင်ဘုရား ဖြေပေးမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို ဝမ်းသာ မိမှာပါ ဘုရား ။ တပည့်တော်မ တို့က အလုပ်ကို မနက် အစောကြီးသွား ညမိုးချုပ်မှ ပြန်ရောက်ပါတယ် ဘုရား Continuous reading
ဇီးကုန်းမြို့မှ အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ဇီးကုန်းမြို့တွင် အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ပြုလုပ် ဇီး ကုန်း မြို့ ၊ မြောင်း ကြီး သု ဿန် ၌ မ ကျွတ် မ လွတ် သူ များ အား ရည် စူး ၍ မေ Continuous reading
သင့်မှာ အဖေရှိသေးရင် ဆက်ဖီဆွဲပြီး လိုင်းပေါ်တင်ဖို့ မရှက်ပါနဲ့
သင့်မှာ အဖေရှိသေးရင် ဆက်ဖီဆွဲပြီး လိုင်းပေါ်တင်ဖို့ မရှက်ပါနဲ့ ခင် ဗျား မှာ အ ဖေ ရှိ သေး တယ် ဆို ရင် သူ နဲ့ အ တူ တူ ဓါတ် ပုံ တွေ ရိုက် ပစ် Continuous reading